News - Horumarinta kristantiyada silikoonka iyo qalabka
Shiinaha ayaa ah soo saaraha iyo dhoofinta ugu badan ee silikoon carbide ee adduunka, iyada oo awoodda ay gaareyso 2.2 milyan tan, oo xaaqaysa in ka badan 80% wadarta guud. Si kastaba ha noqotee, ballaadhinta awoodda xad-dhaafka ah iyo xad-dhaafku waxay horseed u yihiin ka-faa'iideysiga wax ka yar 50%. Sannadkii 2015, soosaarka carbide-ka ee silikoonku wuxuu dhan yahay 1,02 milyan oo tan, iyadoo heerka isticmaalka awoodda ay tahay 46.4% oo keliya; sanadkii 2016, wadarta waxsoosaarka waxaa lagu qiyaasay ilaa 1.05 milyan oo tan, iyadoo heerka isticmaalka kartida ay tahay 47.7%.
Tan iyo markii la tirtiray kootada dhoofinta carbide-ka Shiinaha, mugga dhoofinta carbide-ka Shiinaha ayaa si dhakhso leh u kordhay intii lagu guda jiray 2013-2014, waxayna u janjeeraysay inay xasiliso inta lagu guda jiray 2015-2016. In 2016, dhoofinta carbide ee Shiinaha ayaa yimid 321,500 tan, ilaa sanadkii 2.1% sanadkii; dhexdeeda, tirada dhoofinta Ningxia waxay gaadhay 111,900 tan, oo u dhiganta 34.9% wadarta dhoofinta waxayna u shaqaysaa sidii dhoofinta carbide-ka ugu weyn ee Shiinaha.
Maaddaama badeecooyinka Shiinaha ee loo yaqaan 'silicon carbide' ay yihiin inta badan dhammaad-hooseeya alaab horay loo soo saaray oo qiime dhexdhexaad ah leh, celceliska farqiga u dhexeeya dhoofinta iyo soo dejinta ayaa aad u weyn. Sanadkii 2016, dhoofinta carbide-ka Shiinaha ayaa lahaa celcelis ahaan qiimaha USD0.9 / kg, in ka yar 1/4 celceliska qiimaha soo dejinta (USD4.3 / kg).
Carbide-ka loo yaqaan 'Silicon carbide' waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa birta & birta, qalabka wax lagu karsado, dhoobada, fotovoltaic, korantada iyo wixii la mid ah. Sanadihii la soo dhaafay, carbide silicon waxaa lagu soo daray jiilka saddexaad ee qalabka semiconductor oo ah meel kulul oo caalami ah R & D iyo codsiyada. Sannadkii 2015, cabbirka suuq-geynta carbide-ka caalamiga ah ee silikoonku wuxuu gaadhay qiyaastii USD111 milyan, cabbirka qalabka korontada carbide-ka wuxuu gaadhay illaa USD175 milyan; labaduba waxay arki doonaan celceliska kobaca sanadlaha ah ee kabadan 20% shanta sano ee soo socota.
Waqtigaan la joogo, Shiinaha ayaa ku guuleysatay R & D of semiconductor silicon carbide, waxayna ogaatay wax soo saarka ballaaran ee 2-inch, 3-inch, 4-inch iyo 6-inch silicon carbide substrates monocrystalline, silicon carbide epitaxial wafers, iyo silicon carbide qaybaha . Shirkadaha matalaya waxaa ka mid ah TanKeBlue Semiconductor, SICC Materials, EpiWorld International, Dongguan Tianyu Semiconductor, Global Power Technology iyo Nanjing SilverMicro Electronics.
Maanta, horumarinta kumbuyuutarrada 'silicon carbide' iyo aaladaha waxaa lagu soo koobay Made in China 2025, Hagaha Horumarinta Waxsoosaarka Waxyaabaha Cusub, Dhexdhexaadka Qaranka iyo Qorshaha Horumarinta Sayniska iyo Muddada-dheer (2006-2020) iyo siyaasado badan oo warshadeed. Wadayaasha siyaasadaha wanaagsan ee wanaagsan iyo suuqyada soo ifbaxaya sida gawaarida tamarta cusub iyo shabakadda casriga ah, Semiiconductor-ka silsiladda carbide-ka Shiinaha ayaa markhaati ka noqon doona horumar deg deg ah mustaqbalka.
Waqtiga dhejinta: Jan-06-2012